तिम्रो प्रतिक्षामा « Sansar News
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार ०८:५५
वडा नं-२ दिपायल, डोटी
–खै सुरुवात पनि कहाँबाट गरौं, सुरुवात गर्ने शब्द नै छैन् । प्रिय कान्छु तिम्रो सम्बोधनमा कति मिठास छ कति आदर छ कति त्याग छ,कति समर्पण छ शायद मैले शब्दमा व्याख्या नै गर्न सक्दिन । कुशल छु र कुशलताकै कामना गर्दछु । सम्झनाका तरेलीहरूमा तरङ्गित शब्द माला उनिरहेको छु । तिमीलाई बिर्सन त कहिले पो सकेको थिएँ र न सकेको छु अनि न सक्ने छु । तिमीलाई कस्तो छ ? आरामै छौ होला, आरामसहितको कामना गर्दछु । तिम्रो सम्झना आएर आज यो पत्र लेख्ने हिम्मत गर्दैछु, स्वीकार ल !
कुन शब्दले सम्बोधन गरौं, नेपाली शब्दकोषमा पनि शब्द खोज्न सकिराखेको छैन । कोरा कागजमा कलमको सहायताले मेरा यी कोमल हातहरु थर्थराउँदै पवित्र प्रेम अगाडि बढ्दछन् । प्रिया, मैले त तिम्रो सम्झनामा सच्चा प्यारको आसुँ बगाएको छु, कहाँबाट सुरु गरु कहाँबाट कसरी अन्त गरु मेरा मनका भावनाहरु, साच्चै प्रिया म तिमिलाई धेरै माया गर्छु ।
कहाँबाट यो मनमा मायाको मुल फुट्यो त्यो कुरा त थाहा छैन । प्रिया तिमीलाई सम्झना छ कि छैन म मा भने तिम्रा सम्झनाका बतासले हरेक पल छोएर जान्छन् । यस्तो लाग्छ त्यहि चिसो बतासभरी तिम्रो माया भरिएर आउछन् अनि मलाई तड्पाएर जान्छन् । तिम्रो सुन्दर प्रतिविम्ब मेरो नजर वरीपरी घुमिरहन्छ । मेरो मनकी राजकुमारी यो दिलको चोखो माया केवल तिमीलाई ।
वास्तविकतामा प्रेम मीठो अनुभुति हो । उमेरमा जो सँग भावना मिल्छ उसैसँग माया पिरती बस्न जान्छ । प्रेम मनभित्रको चोखो भावना तथा हृदयको चाहना हो । तिमी समक्ष मेरो प्रेम व्यक्त गर्न यो पत्रको साहारा लिदैछु । तिमी आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्छ्यौं । तिमी आफ्नो छातीमा हात राखेर भगवान साक्षी राख्दै भन प्रिया अब म के गरुँ ?
तिमिसँग पहिलोपटक भेट हुँदा तिम्रा ति नयनमा मात्र मेरा नजरले हेरेको थिए । हिँड्दै बाटोमा दुई अपरिचित व्यक्ति बिच कुराकानी भएको त्यो क्षण र गन्तव्य पुगेर बिदाईका हात हल्लाउँदै हिडेका थियौ । त्यो तिम्रो हेराई, कुरा गराईले मेरो मनमा तरङग पैदा भएको थियो । अनेक कल्पनामा डुब्दै आफैले आफैसँग प्रश्न गरेको थिए अनि मनमा उत्पन्न चाहनाको बारेमा धेरै सोचे, कसरी तिमी मेरो हृदयमा बास बस्न आइपुग्यौं । तिम्रो मिठो मुस्कानले मलाई त्यहि क्षण मोहित बनाएको थियो प्रिया ।
आज म यो मन्दिरमा बसेर कसम खादैछु । यो जिन्दगी तिमीलाई समर्पण गर्दैछु । यो जगतमा म रहुन्जेल तिमिलाई माया गरिरहन्छु । तिम्रो दिलमा बास गर्न ठाउँ मागिरहेको छु । जीवनमा सँगै सहयात्री भएर जीवन बिताउने अवसर प्रदान गर्नेछौ भन्ने आशामा छु प्रिया । तिम्रो दिलबाट चोखो मायाको अपेक्षा पनि गरेको छु । अनि तिमी बिनाको जिन्दगी कल्पना गर्न नसकेर मायाको भिक्षा मागिरहेको छु प्रिया ।
तिम्रो रुप र त्यो हिडाई सधै हेरिरहु लाग्छ । त्यो सुन्दर रुप देखेपछि यो मनमा अनेक भावनाहरु आउन थाल्छन् । चन्द्रमुखि मुहार तिम्रो सधै सम्झना आईरहन्छ । अनि मन भनिरहन्छ् यति सुन्दर मान्छेको मन कति सुन्दर होला ! तिमी बिनाको जीबनको कल्पना गर्न सक्दिन मैले । तिमीले बुझ्छ्यौं प्रिया मेरो प्रेमलाई । मेरो यो दिल देखि गरेको माया स्विकार गर ल !
म तिम्रो उत्तरको प्रतिक्षामा गरिरहनेछु । तिमी प्रतिको मेरो माया म यो धर्तीमा रहुन्जेल सम्म कहिल्यै अस्ताउने छैन र कमि पनि आउने छैन । किनकि मैले त तिमीलाई मन मुटुमा राखेको छु तर यसको मतलब यो होइन कि, तिमी नै मेरो जीवनमा आउनुपर्छ । आएनौ भने पनि म तिम्रो मायामा पागल झै तड्पिने पागल प्रेमी चाहिँ पक्कै होइन । तर पनि तिमी बिनाको मेरो जीवन पानी बिनाको माछा सरह छ अनि तिमीसँग छुट्टिएर अर्को दुनियाँ बसाउने म कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दिनँ । हर रात, हरक्षण तिम्रो सम्झनाले सताउने गर्दछ । मेरो मनको चाहना बुझेर मलाई भेट्न आउने छौ भन्ने आसामा छु प्रिया । म तिम्रो पर्खाईमा बसिरहेको छु । तसर्थ आज तिम्रो यादमा यी हरफहरु लेख्ने जमर्को गरिरहेको छु । हर रात, हरक्षण तिम्रो सम्झनाले सताउने गर्दछ । तसर्थ आज तिम्रो यादमा यी हरफहरु लेख्ने जमर्को गरेको छु तिम्रो सहयात्री म अन्जुली भरी प्रेमको भिक्षा माग्दै अन्तर हृदयदेखि विदा चाहन्छु !!
तिम्रै प्रतीक्षामा बसिरहेकी तिम्रो अदृश्य प्रेमि